student | नुवागी
बालक हाम्रो खेलौना होइन
कोहीले बालबालिकालाई आफ्नो दारी दल्ने, उफार्ने, बच्चाको फरक फरक अभिव्यक्ति हेर्नका लागि उसलाई हँसाउने, रुवाउने र रमाइलो मान्ने । कतिले त बच्चालाई ‘कस्तो किउट’ भन्दै माया गरेको जसरी बेस्मारी गाला तान्ने पनि गर्छन् । साथै बालकलाई यहाँबाट खसालिदिऊँ भन्दै उचाईबाट तर्साउने, डर देखाउने र...
के तपाईँ असल अभिभावक हुनुहुन्छ ?
अभिभावकलाई आफ्नो छोराछोरी कस्तो होस् भनेर सोध्योैँ भने प्राय आउने उत्तर भनेको - छोराछोरीले भनेको मानोस्, जिद्घी नगरोस्, धेरै पढोस्, सृजनात्मक होस्, उसमा आत्मविश्वासको कमी नहोस् भन्ने नै सुन्न पाउँछौँ ।
सुप्रिमा के.सी सानो सानो कलम मेरो तर काम यसको ठूलो यै कलमले गर्दा मानिस बन्छन् संसारमै महान । क ख ग घ र ए बी सी डी यै कलमले लेख्छु भविष्यको सुन्दर सपना यै कलममा देख्छु । यै कलमले कथा लेख्छु यै कलमले कविता...
मेरो देश, मेरो सर्वस्व
सविना धमला विश्वको नक्सा पल्टाएर नियाल्दा सिन्धुमा हराएको बिन्दुझैँ लाग्छ मेरो देश । हिमालका शिरमा हरिया भोटाले सौन्दर्य पस्किरहेछन्, तराईका कटीमा पहेलपुर कछाड फर्फराइ रहेछन् । प्रकृतिको अनुपम उपहारझैँ लाग्ने मेरो देश मेरो हृदयको धड्कन हो, मेरो देहको नसा हो । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी...
घर परिवारमा खुसीयाली लिएर जन्मेका भन्छन् सबैले उनीहरूलाई बालबालिका फुलको कोपिला झैँ विस्तारै बढ्छन् आफ्नो हाँसोले सबैलाई हसाउँछन् खुसी हुन्छन् केही कुरा देख्दा नयाँ उनीहरूलाई लाग्छ सबैमा माया जसरी चल्छ हावा सिरीसिरी यिनीहरू डुल्दै उफ्रन्छन् घरीघरी केही कुरा बोल्न र भन्न गर्दैनन् संकोच यिनीहरू...
कहिले बुझ्छ समाजले छोरीको मर्म?
प्राचीन कालदेखि समाजमा अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ । समाजमा भेदभाव छुवाछुत, दाइजो तथा बली प्रथा चलिआएको छ । यस्तै भेदभावमध्ये एउटा भेदभाव हो, ‘छोरा र छोरीबिच गरिने भेदभाव’ । यो आफैँमा सरासर गलत छ । छोरा हुन् कि छोरी आखिर आमाबुबाका सन्तान नै हुन्...